अबको नया नियम अनुसार नेपालीले नागरिकता र पासपोर्ट नगरपालिका या जिल्लाप्रशासन कहाँ बाट लिन्छन् ? – Complete Nepali News Portal
अबको नया नियम अनुसार नेपालीले नागरिकता र पासपोर्ट नगरपालिका या जिल्लाप्रशासन कहाँ बाट लिन्छन् ?
April 2, 2017	13,080 Views
नेपालमा एक नया बिषयको बहस सुरु भएको रहेछ । अबको नया नियम अनुसार नेपालीले नागरिकता र पासपोर्ट नगरपालिका या जिल्लाप्रशासन कहाँ बाट लिन्छन् ? किनभने नया प्रणाली अनुसार जिल्ला प्रशानसन कार्यालयको अस्तित्व समाप्त हुँदैछ । यहि सन्दर्भमा मैले बिश्वको चौथो बिकसित देश फ्रान्समा के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरु समक्ष राख्दैछु ।
1. बिदेशी मानिसले यहाँ बस्ने अनुमति लिँदा शुरुमा यहाँको गृह मन्त्रालयको नागरिकता सेक्सनले ( जसलाई यहाँ पर्फेक्चुर द पोलिस भनिन्छ ले) सबै काम फत्ते गर्छ । त्यसपछिका काममा जुन नगरपालिकामा बसेको हो उसले मद्दत गर्छ ।
2. मानिसको प्रसासनिक रेकर्डको शुरुवात बैबाहिक दिनबाट हुन्छ । बिबाह अनिवार्य रुपले नगरपालिकामा गर्नुपर्छ । नगरपालिकाका कर्मचारीको उपस्थितिमा बिबाह हुन्छ । सोही दिन नगरपालिकाले उनीहरुलाई एक नोट बुक ( लिभ्रे द फ्यामिइ )दिन्छ । यो नोट बुकमा केटा र केटीको जन्म देखि उसका बाबु आमा र उनीहरुको ठेगाना सँरक्षित हुन्छ । ( बिदेशबाट आउनेहरुका हकमा उत्पत्ती देशको बैबाहिक सम्बन्धलाई नै मान्यता दिइन्छ।)
3. फ्रान्सेली नागरिक या अन्य जो कोही पनि बच्चाको जन्म भइसकेपछि उसको जन्म दर्ता नगरपालिकामा अनिवार्य रुपले गर्नुपर्छ । बिबाहको दिन प्राप्त नोट बुकमा उसको बच्चाको नाम लेखिन्छ र बाँकीहरुको पनि थप्दै गइन्छ ।
4. जब बच्चाले नागरिकता लिने दिन आउँछ सो को निवेदन नगरपालिकामा दिइन्छ । नगरपालिकाको नागरिकता सेक्सनले बच्चाको ओठा छाप लिन्छ र चाहिने आवस्यक कागजात सप्पै मिलाएर उसको क्षेत्रमा रहेको गृह प्रशासनको नागरिकता सेक्सनमा पठाउँछ । नागरिकता हरायो भनेपनि यहि नै प्रोसेस हुन्छ । अनि नागरिकता नगरपालिकामै बनेर आउँछ र सो को जानकारी नगरपालिकाले एसएमएस टेलीफोन या इमेलबाट दिन्छ । अनि नगरपालिकामै गएर नागरिकता लिइन्छ । (तर यसको मतलब यो होइन कि सिधै प्रहरीमा जान पाइन्न पाइन्छ र आँफैले सबै तयारी गरेर छुट्टै आवेदन दिन पनि पाइन्छ । नगरपालिकाले यो सेबा दिएको हुन्छ र त्यहाँ अग्रिम आवस्यक कागजातहरु पुरा भए नभएको हेरिन्छ । )
5. फ्रान्समा नागरिकता पासपोर्ट र लाइसेन्सलाई एउटै हिसाबले मान्यता दिइएको छ अर्थात फ्रान्सको कुनै पनि प्रसासनिक काममा हिड्नु भएको छ भने यि मध्ये जुन देखाएपनि तपाँइको प्रशासनिक काम फत्ते हुन्छ र यि मध्ये एक अनिवार्य रुपले तपाँइले आफ्नो साथमा बोकेको हुनैपर्छ । तस्विरमा क्रमश फ्रान्समा बस्ने अनुमति कागज अर्थात Titre de séjour (लाल बाबु पन्डितले यो पाउनु भनेको भविष्यम सोहि देशको नागरिक बन्नु हो भन्नुभएको थियो तर यो पाउँदैमा सबै मानिस फ्रान्सेली नागरिक बन्न सक्दैनन । नागरिक बन्ने प्रकृया निकै गाह्रो छ बिदेशी मुलका हकमा ) । नीलो फ्रान्सेली नागरिकता । नागरिकतामा बकाइदा RF लेखेको हुन्छ । यसको मतलब रिपब्लिक फ्रान्स भनेको हो । रातो फ्रान्सेली पासपोर्ट । र अन्तिमको ड्राइभिँग लाइसेन्स । एक पटक फ्रान्सको ड्राइभिँग लाइसेन्स लिइसकेपछि युरोपभरी यसका भरमा गाडि गुडाउने अनुमति हुन्छ र बिश्वका अरु कतिपय देशले पनि यसलाई मान्यता दिएका छन् । यि सबै कागजपत्रमा एक नम्बर हुन्छ । प्रहरीले नम्बर कम्यूटरमा राख्नासाथ उसको उत्प्त्ती देखिका सबै इतिहास क्षणभरमा पत्ता लाउँछ ।